Meizu 16 na 16 Plus gafere TENAA: isi atụmatụ ekpughere | Gam akporosis
The Meizu 16 na 16 gbakwunyere, Onye na-esote ọkọlọtọ duo nke ụlọ ọrụ China, ka pụtara na nso nso a na TENAA, onye nyocha nke China, nke ha gosiri anyị atụmatụ ha na ụfọdụ nkọwapụta teknụzụ na njirimara amaalarịrị na mbụ, mana nke bụ eziokwu ugbu a.
Ngwaọrụ abụọ a dị elu ga-egosiputa na ụdị na August 8. Na mgbakwunye, dịka nnukwu atụmanya nke Jack Wong, onye isi nke Meizu si kwuo, ha ga-emeri n'ahịa na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Edebanyela Smartphones na nchekwa data TENAA n'okpuru nọmba ụdị M882Q y M892Q, Koodu nke Meizu 16 na 16 Plus dika.
Meizu 16 na TENAA
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, imewe eji dikwa ka nke Meizu 15, nke a na-ebelata nnọọ n'ọnụ ya na nke ọ bụla nke ya n'akụkụ, ihe karịrị ihe ọ bụla na n'akụkụ, na-etiti ogbo na n'ihu. Na azụ, ekwentị abụọ nwere ntọala igwefoto abụọ kwụ ọtọ na-esote ọkụ ọkụ LED, mana ha enweghị onye na-agụ akara mkpịsị aka dịka ekwuru ya, ebe ọ bụ na ha ga-etinye ya n'okpuru ihuenyo.
Dị ka data ndị ọzọ si dị, na Meizu M882Q (16) nwere ihu igwe elekere isii ma nwee batrị 2.950mAh. Akụkụ ya bụ 150.5 x 73.2 mm. N'akụkụ aka nke ọzọ, Meizu M892Q (16 Plus) nwere ihuenyo 6.5-inch, ike batrị 3.750mAh na nha 160.3 x 78.2 mm. Na mgbakwunye na nke a, ekwentị abụọ nwere mkpa 7.3mm ọkpụrụkpụ.
Meizu 16 gbakwunyere na TENAA
N'ikpeazụ, A na-atụ anya ka ekwentị ndị a jiri 18: 9 akụkụ akụkụ ngosipụta AMOLED, na Qualcomm Snapdragon 845 ma ruo 8GB Ram. Ọbụna nke ahụ, anyị ga-echere maka data gọọmentị nke a ga-enye n'ụbọchị a ga-ewepụta ya iji pụọ na ịkọ nkọ na nkwenye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu 16 na 16 Plus gafere TENAA: ekpughere atụmatụ ndị isi